आनाको १० लाख भनेको जग्गा ७ दिन मात्र भयो ६ लाख आनामा लिनुभन्दा पनि मान्छेले लिन छोडिसके – Bihani Khabar
Home / Business / आनाको १० लाख भनेको जग्गा ७ दिन मात्र भयो ६ लाख आनामा लिनुभन्दा पनि मान्छेले लिन छोडिसके
पौरखी किसानको कथाः अफ्रिकी बाख्रा पालेर धनपति
गाईको बाच्छीमात्रै जन्माउने प्रविधि प्रभावकारी बन्दै
१ आनाको १० लाख भनेको जग्गा ७ दिन मात्र भयो ६ लाख आनामा लिनुभन्दा पनि मान्छेले लिन छोडिसके
नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह रोकमा कडाई गर्न थालेको छ । अहिले विशेषगरी अनुत्पादक क्षेत्रमै बैकका कर्जा प्रवाह तुलनात्मक रुपमा बढी भईरहेको छ । यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको हो । राष्ट्र बैंकको कडाईको प्रत्यक्ष मारमा भने सेयर, घरजग्गा र अटो लोनमा परेको छ ।
Previous युवतीहरु भाडाको बेहुला खोज्दै
Next वर्षाको ढाँट्ने बानीले निर्माता-निर्देशक हैरान !
तेह्रथुममा तरकारीको मूल्य आकासियो
तेह्रथुम: दसैँ अघिसम्म सस्तो रहेको बन्दागोभी, काउली र मुलाको मूल्य चाडबाड लागेसँगै अकासिएको छ। दसैँअघि …
गोपाल किरातीलाई कारवाही गर्न १८ पोलिटब्युरो सदस्यको माग
स्वर्ग भन्दा कम छैन नेपालको तिलिचो ताल, तर कुन समयमा जाँदा सबैभन्दा बढी मज्जा लुट्न सकिन्छ ? जान्नुहोस्
दर्शकलार्इ मन पर्ने फिल्म बनाएकाे छुः नायक रमेश उप्रेती